» उत्कृष्ट ७ मा को पर्ला ?
उत्कृष्ट ७ मा को पर्ला ?
२८ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ११:५९
चन्द्र घलान, मकवानपुर, २८ कात्तिक । विश्व प्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी शो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा यो साता २ जोडीहरु बाहिरिँदै छन् । यहि शनिबार हुने चौथो ईलिमिनेसनबाट २ जोडीहरु बाहिरिने आयोजकले घोषणा गरिसकेको छ । २ जोडीहरु बाहिरिएसँगै शोमा ७ जोडी प्रतियोगीहरुमात्र बाँकी रहनेछन् । तपाईको विचामार यी ९ जोडीहरुमध्ये उत्कृष्ट ७ भित्र कुन कुन जोडीहरु पर्लान् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस भिडियो सामग्रीमा यी ९ जोडीहरुले हालसम्म पाएका उपलब्धी र उत्कृष्ट ७ मा पुग्नसक्ने आधारहरुका बारेमा चर्चा गरिएको छ । हेर्नुहोस् यो भिडियो फिचर–
गत साता दुई जोडीहरुले सर्वाधिक ३०–३० अंक प्राप्त गरेका थिए । गत साता सृशव जोडी र देवार्थ जोडीले समान ३०–३० अंक प्राप्त गरेका हुन् । उनीहरुमध्ये सृष्टि केसी र केशव थापाको जोडीले पहिलो नृत्यबाट नै पर्फोमेन्स अफ द विकको अवार्ड पनि जितेका थिए । स्टेजमा सृशव जोडीका रुपमा परिचित यो जोडीले गत हप्ता ३० अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले सातौँ हप्ता सकिँदासम्म जम्मा १९२ अंक प्राप्त गरेका छन् । यो हालसम्म प्राप्त अंकहरुको आधारमा सबैभन्दा बढी अंक हो । उनीहरुले पहिलो हप्ता पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए । त्यस्तै डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालका सबैभन्दा कान्छो जोडी दिभान्सी बैदवार र सिद्धार्थ श्रेष्ठको जोडीलाई कोरियोग्राफर सञ्जय लामाले कोरियोग्राफ गरिरहेका छन् । स्टेजमा देवार्थ जोडीले परिचित दिभान्सी र सिद्धार्थले पनि गत हप्ता ३० अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले सातौँ हप्ता सकिँदा सम्म जम्मा १८४ अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले चौथो हप्ता र सातौँ हप्तामा गरी २ पटक पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड पनि जितेका छन् । जसका कारण यो जोडी यो हप्ता बलियो देखिएको छ । त्यस्तै कोरियोग्राफर सुनिल बिकसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका टिकटक स्टार दिपा र दमन्ता श्रेष्ठले शोमा गत साता २९ अंक प्राप्त गरेका थिए । स्टेजमा सुदिमन्ता नामले परिचित यो जोडीले सातौँ हप्ता सकिँदासम्म जम्मा १९१ अंक प्राप्त गरेको छ । हालसम्म प्राप्त जम्मा अंकका आधारमा यो जोडी दोस्रो नम्बरमा छ । यो जोडीले पाँचौँ हप्तामा पहिलो पटक पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए । यो जोडी गत साता सर्वाधिक अंक प्राप्त गर्ने जोडीहरुमध्ये तेस्रो नम्बरमा पर्छन् ।
निर्णायकबाट प्राप्त अंकहरुका आधारमा हेर्ने हो भने गत साता कलाकार उमेश राई अर्थात फुलन्देकी आमा र कोरियोग्राफर प्रमोद भण्डारीको जोडीले सबैभन्दा कम अंक ल्याएका थिए । स्टेजमा आमोद जोडीका नामले परिचित यो जोडीले गत हप्ता २५ अंक मात्र प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले सातौँ हप्ता सकिँदासम्म जम्मा १८४ अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले तेस्रो हप्ता पर्फाेमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए । उनीहरुको जोडीले पनि एक पटक बटम थ्रीको सामना गरिसकेको छ । गत साता कम अंक प्राप्त गरेकोले यो जोडी खतरामा पर्नसक्ने देखिन्छ । त्यस्तै डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा पहिलो वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीका रुपमा प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका पहिलो जोडी हुन् कलाकार प्रियना आचार्य र कोरियोग्राफर शुभम भुजेलको जोडी । स्टेजमा प्रियम जोडीका नामले परिचित यो जोडीले गत हप्ता २६ अंक मात्र प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले हालसम्म जम्मा ७२ अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले एक पटक बटम थ्रीको सामना गरिसकेका छन् । गत साता कम अंक आएकोले यो जोडीलाई पनि यो हप्ता खतरा देखिन्छ ।
त्यस्तै गत साता दुई जोडीहरुले समान २७–२७ अंक प्राप्त गरेका थिए । सुबिजु जोडी र ज्योतिला जोडीले समान २७–२७ अंक प्राप्त गरेका हुन् । नायिका सुमी मोक्तान र कोरियोग्राफर बिजु पार्कीको जोडीले गतहप्ता २७ अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले सातौँ हप्ता सकिँदासम्म जम्मा १८९ अंक प्राप्त गरेका छन् । स्टेजमा सुबिजु नामले परिचित यो जोडीले दोस्रो हप्ता पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए । यो जोडीले एक पटक बटम थ्रीको सामना गरिसकेको छ । सुमीलाई सातौँ हप्ता सोमु गुरुङले नृत्यमा साथ दिएका थिए । त्यस्तै गायिका ज्योति मगर र कोरियोग्राफर लाउरे सिंहको जोडीले पनि गत साता २७ अंक प्राप्त गरेका थिए । स्टेजमा ज्योतिला नामबाट परिचत यो जोडीले सातौँ हप्ता सकिदासम्म जम्मा १८२ अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले छैटौँ हप्तामा पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए । गत साता कम अंक ल्याउने जोडीहरुमध्ये यो दुई जोडीहरु तेस्रो नम्बरमा छन् । तसर्थ आमोद र प्रियम जोडीसँगै सुबिजु र ज्योतिला जोडी पनि यो हप्ता खतरामा पर्न सक्छन् । तर गत सातासँगै यो हप्ता निर्णायकले दिएको मत र दर्शक भोटका आधारमा नतिजा निकालिने भएकोले उनीहरु सुरक्षित हुनसक्ने अवस्था पनि उत्तिकै देखिएको छ ।
त्यस्तै गत साता दुई जोडीहरुले समान २८–२८ अंक प्राप्त गरेका थिए । गत साता प्रयत्न जोडी र बुद्धिका जोडीले समान २८–२८ अंक प्राप्त गरेका हुन् । कलाकार प्रशान्त ताम्राकार र कोरियोग्राफर स्वयत्ना योञ्जनको जोडीले गत साता २८ अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले सातौँ हप्ता सकिँदा जम्मा १७८ अंक प्राप्त गरेका छन् । स्टेजमा प्रयत्न जोडीका रुपमा परिचित यो जोडीले २ पटक बटम थ्रीको सामना समेत गरिसकेको छ । दोस्रो र तेस्रो ईलिमिनेशन विकमा लगातार बटम थ्रीमा परेकोले यो जोडीलाई यो हप्ता पनि खतरा होला कि भन्ने दर्शकहरुको अनुमान छ । तर गत साता भने यो जोडीले राम्रो अंक ल्याएकोले बटम थ्रीमा पर्न नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ । त्यस्तै प्रतियोगितामा भाग लिएका सबै स्टार र कोरियोग्राफरहरुको जोडीहरुमध्ये सर्वाधिक केमेष्ट्रि मिलेको जोडीका रुपमा बुद्ध लामा र केबिका खत्रीको जोडी चर्चामा छ । स्टेजमा बुद्धिका जोडीका नामले परिचित यो जोडीले पनि गत हप्ता २८ अंक प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले सातौँ हप्ता सकिँदासम्म जम्मा १८४ अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले एक पटक बटम थ्रीको सामना गरेका छन् । गत साता राम्रो अंक ल्याएकाले यो जोडी यो हप्ता सुरक्षित हुने अनुमान दर्शकहरुले गरेका छन् ।
हालसम्म निर्णायकहरुबाट प्राप्त अंकका आधारमा सृष्टि केसी र केशव थापाको जोडी पहिलो नम्बरमा छन् । उनीहरुले सातौँ हप्ता सकिँदासम्म जम्मा १९२ अंक प्राप्त गरेका छन् । सातौँ हप्तासम्मा नै निर्णायकहरुबाट प्राप्त अंकका आधारमा सबैभन्दा कम अंक कलाकार प्रशान्त ताम्राकार र कोरियोग्राफर स्वयत्ना योञ्जनको जोडीले प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले सातौँ हप्ता सकिँदा जम्मा १७८ अंक प्राप्त गरेका छन् । तर वाईल्ड कार्ड जोडीका रुपमा पछि सहभागी भएकाले तेस्रो हप्तासम्ममा कलाकार प्रियना आचार्य र कोरियोग्राफर शुभम भुजेलको जोडी जम्मा ७२ अंक प्राप्त गरेका छन् ।